काभ्रेमा कोरोना संक्रमण भयावह बनिसक्यो ! – मिलिजुली खबर
काभ्रेमा कोरोना संक्रमण भयावह बनिसक्यो !
in गृहपृष्ठ, फिचर, स्वास्थ्य
धुलिखेल २८ बैशाख: काभ्रेमा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै जान थालेको छ । यो कुराको तथ्य स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाको फेसबुक स्टाटसबाट प्रष्ट हुन्छ ।
जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसीसीएमसी) का सदस्य समेत रहनुभएका डाक्टर झाले मंललबार साझ फेसबुकमा जिल्लाको नाम उल्लेख नगरी यस्तो लेख्नु भएको छ ‘अब त अति भयो २४,२७,३०,३३ वर्षका मर्न थाले । अस्पतालमा ठाउँ छैन, अक्सिजनको हाहाकार छ । स्वास्थ्कर्मीहरु आफै संक्रमित हुँदै उपचारमा संलग्न छन् । हे मेरा सरकार स्वास्थ्य संकट घोषणा गर, कडाइका साथ लकडाउन लागू गर ।
जिल्लामा कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा रोकथामको व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्दै आईरहनु भएका डाक्टर झाले काभ्रे जिल्ला नै भनेर नाम नतोकेपनि घटना विवरण भने सबै काभ्रे जिल्लासँग मिल्दोजुल्दो छ । धुलिखेल वडा नम्बर ११ का २७ बर्षीय युवाको होम आईसोलेसनमै दुईदिन अघि मृत्यु थियो ।
त्यस्तै पनौती नगरपालिकाका २७ बर्षीय युवाको हिजो, पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर ९ का ३० वर्षीय र भक्तपुर थिमीकी ३३ बर्षीय महिलाको उपचारको क्रममा आज धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । डाक्टर झाका अनुसार जिल्लामा अहिले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने धुलिखेल अस्पताल र शिर मेमोरियल अस्पताल बनेपामा बेड छैन । अक्सिजनको समेत हाहाकार छ । डाक्टर झाले कोरोना संक्रमणको अब थप फैलन नदिन तत्काल स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर लकडाउन गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।
आज एकैदिन काभ्रेमा १९२ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु छ । तर कार्यान्वयन खासै भएको देखिदैन । सर्वसाधारणले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगर्दा पनि परिस्थिति जटिल बन्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मी आफै संक्रमित भएर पनि अन्य संसंक्रमितको उपचारमा खटिनु पर्ने अवस्था छ ।
आईसोलेसनमा बसेका आमाहरूलाई मेयर खरेलको कोसेली '२ हजार नगद, मास्क र स्यानिटाईटर'